Karnalikhabar » शताब्दीकै ठूलो ‘ट्रान्सफर’ ! शताब्दीकै ठूलो ‘ट्रान्सफर’ ! – Karnalikhabar
शताब्दीकै ठूलो ‘ट्रान्सफर’ !
प्रकाशित मिति :2017-08-12 15:18:44
योहान क्रुफ बार्सिलोना र यसले पस्कने फुटबलका पर्यायी जस्तै हुन् । यिनै डच लेजेन्डले केही वर्षअगाडि भनेका थिए, ‘एकै जहाजमा दुई कप्तान हुन सक्दैनन् ।’ भयो भने राम्रो होइन । भएन भने धेरै राम्रो । बार्सिलोनामा यस्तो स्थिति यसअघि पनि आइसकेको रहेछ, पछिल्लो सिजन पनि यस्तै स्थिति थियो । क्रुफको सल्लाह थियो, बार्सिलोनाले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पछिल्ला केही सिजन बार्सिलोनामा अर्जेन्टिनी लियोनल मेसी पनि थिए, ब्राजिली नेयमार पनि थिए ।
अझ सँगै उरुग्वेली लुइस स्वारेज पनि । क्रुफको भनाइ यहाँनिर सापटी लिएर केही दोहोर्‍याउन आवश्यक रह्यो भने सम्भवत: यी तीन खेलाडी छँदा बार्सिलोनामा एकै जहाजमा दुई कप्तानको स्थिति थियो कि ? यी तीन खेलाडीले मैदानमा तहल्का मच्चाएको समाचार त धेरै आए, तर त्यस्तै उनीहरूबीच एक प्रकारको तनाव, ईष्र्या, आलोचना र टकराव सबै थियो भन्ने समाचार पनि त छुटेका थिएनन् । गुपचुप नै सही, स्थिति त्यस्तै थियो ।
भन्न त बार्सिलोनालाई ‘मोर द्यान अ क्लब’ पनि भनिन्छ । अर्थात्, बार्सिलोना एउटा क्लबभन्दा धेरै अरू थोक पनि हो । सायद, यहाँनिर बार्सिलोना मेसी र नेयमारको प्रसङ्गमा चुक्यो कि ‘एउटा क्लबभन्दा धेरै थोक’ हुन ? बार्सिलोनाले नेयमारलाई २२ करोड २० लाख युरोको कीर्तिमानमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई बेचेपछि यस्ता प्रसङ्गले धेरै ठाउँ पाए । बार्सिलोनाले नेयमारलाई बेच्नुपर्ने एउटा प्रमुख कारण यो हुन सक्छ ।
अब खेलाडीको दृष्टिकोणबाट । नेयमारले किन बार्सिलाना छाडे भन्ने कारणका रूपमा धेरैले एउटा तस्बिरको सहारा लिए । त्यसमा मेसीले दाहिने हात उठाएर जितको खुसी मनाइरहेका छन् । उनलाई कसैले बोकेका पनि छन् । त्यसमा मेसीलाई साथ दिने अरू धेरै छन् । मानौं, यो तस्बिर हेरेपछि लाग्छ, मेसी भनेका बार्सिलोनाका लागि भगवान् हुन् । यो तस्बिर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाले पीएसजीलाई हराएयताको हो ।
बार्सिलोनाले दुई ‘टाइ’ को खेलमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सनसनीपूर्ण पुनरागमन गरेको थियो । बार्सिलोनाले यस्तो गर्न सक्छ भनेर सोचिएकै थिएन । दोस्रो लेगको अन्तिम सात मिनेटमा तीन गोल गरेको बार्सिलोनाले समग्रमा यो प्रतिस्पर्धा ६–५ ले जित्यो । जित्न त जित्यो, तर सबै श्रेय मेसीलाई नै किन ? त्यो खेलपछि चारैतिर मेसी छाए, तर ठीक त्यही बेला नेयमार भने कहाँ हराए त ? बार्सिलोनालाई त्यो प्रसिद्ध जित दिलाउने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खेलाडी मेसी थिएनन्, बरु थिए त नेयमार ।
बार्सिलोनाले दोस्रो लेगको अन्तिम सात मिनेटमा गरेका पछिल्ला तीन गोलमध्ये दुई नेयमारकै नाममा थिए । सर्जियो रोबर्टोले गरेको अन्तिम गोलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने पनि नेयमार नै थिए । ठीक त्यही बेला नेयमारले सोचेको दाबी गरिन्छ, ‘अब त धेरै भयो । हदै भयो ।’ नेयमारले आफ्नो खेल जीवनकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेल खेले, तर चर्चा भने खालि मेसीको थियो । नेयमार बार्सिलोनाले पस्कने खेलमा सह–नायक बन्न अब तयार थिएनन् ।
स्पेनी मिडियाले तयार पारेको कारण नै यही हो, नेयमारले बार्सिलोना छाडेर पीएसजी रोज्नुपरेको स्थितिको । अर्को सिजन विश्वकपको पालो हो । अहिले नेयमार भर्खर २५ वर्षका भए । रूसमा हुने विश्वकपका लागि ब्राजिली छनोट पनि भइसकेको छ । नेयमार रूसमा पनि त्यस विश्वकपमा ब्राजिल र आफ्नो लागि धेरैथोक गर्न चाहन्छन् ।
त्यसैले उनी त्यस्तो क्लब चाहन्थे, जहाँ उनको चर्चा टिमको प्रमुख खेलाडीका रूपमा गरियोस् । सम्भवत: त्यो स्थिति बार्सिलोनामा कुनै पनि स्थितिमा तयार हुन सक्ने थिएन । अनि यो स्थिति मैदानमा मात्र होइन, मैदान बाहिर पनि होस् ।
नेयमारका लागि पीएसजीले ठ्याक्कै यस्तै स्थिति तयार पारेको थियो । यी दुई कारण जोडेर फेरि के पनि भन्ने प्रयास गरिएको छ भने पछिल्ला केही वर्ष बार्सिलोनाका लागि खास भन्ने हो भने राम्रो छैन । प्रशिक्षकका रूपमा पेप ग्वार्डिओलाले छाड्नु, उनको स्थानमा आएका टिटो भिलानोभको पनि मृत्यु हुनु, केही खेलाडी कर छलेको आरोपमा फस्नु । उदाहरण धेरै छन्, बार्सिलोनामा कचमचको ।
फेरि यहाँनिर छुटाउन नहुने अर्को स्थिति पनि छ । भनिन्छ, बार्सिलोनाले नेयमार ढिलो चाँडो अरू कुनै क्लबमा जानेछ भनेर सोचेकै थिएन । नेयमारले बार्सिलोना छाड्ने निर्णय सुनाउँदा क्लबका धेरै सिनियर खेलाडीले आश्चर्य मानेका थिए । नेयमारको घटनाक्रममा बार्सिलोनाको व्यवस्थापन पक्ष बढी संलग्न थियो, खेलाडी होइन । त्यसैले होला, नेयमारले बार्सिलोनाका साथी खेलाडीसँग बिदाइ माग्न आउँदा स्थिति निकै नाजुक बनेको थियो, स्पेनी मिडिया यस्तै दाबी गर्छ ।
एकाध नाटकीय स्थितिपछि नेयमारको पीएसजी ट्रान्सफर अन्तत: पूरा पनि भयो । यसलाई कसरी हेर्ने हो भनेर विश्लेषण गर्ने अरू केही मुद्दा पनि छन् । जस्तो, पीएसजीले एकै खेलाडीका लागि यति धेरै रकम किन तिर्‍यो त ? तिरे पनि कसरी तिर्नेछ त ? यो यति धेरै रकम थियो कि जसको मदतबाट सिंगै एउटा राम्रो टिम नै बनाउन सकिन्थ्यो, युरोपेली फुटबलमै राम्रो टक्कर दिन सक्ने टिम । यसअघि सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका पउल पोग्बाको भन्दा नेयमारका लागि दोब्बरभन्दा बढी तिरिएको थियो ।
फेरि पीएसजी विश्वका धनी दस क्लबमा पनि पर्दैन । तर यसका लागि खेलाडी किन्ने क्लबले कसरी रकम भुक्तानी गर्छ, त्यसबारे भने बुझ्न आवश्यक छ । पीएसजीले बार्सिलोनालाई एकैपल्टमा २२ करोड २० लाख तिर्ने छैन् । किस्ता किस्तामा तिर्नेछ । अब यो किस्ता कत्तिको हो, कित्ता कति समयको हुनेछ, त्यो भनेर बाहिर आएको छैन । तर भुक्तानी गर्ने शैली भने त्यही हो । हुन सक्छ, पीएसजीले दस वर्ष लगाएर प्रत्येक वर्ष दुई–दुई करोड युरो तिर्छ कि ?
पीएसजीमा कतारको योगदान छ भनेर पनि बिर्सन हुन्न । सन् २०११ तिर पीएसजीमा कतारी शाही परिवारले लगानी सुरु गरेको थियो । कतारी शाही परिवार खासमा अब्बल दर्जाको व्यापारी हो । यो परिवारले अश्विसनीय रूपमा धेरै लगानी मात्र गर्दैन, त्यत्तिकै मात्रामा नाफा खाने उपाय पनि उनीहरूसँग छ । पक्कै पनि नेयमारका लागि चर्को रकम त तिरियो, तर अहिले नै पीएसजीले कीर्तिमानी रकममा प्रायोजक पाउन थालिसकेको छ ।
नेयमारको नाम अंकित जर्सी धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, त्यो कतारी शाही परिवारलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेयमार पीएसजी गएयता यसले विश्व फुटबलको समीकरण नै फेरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेयमार आएयता पीएसजी फ्रान्स मात्र होइन, अझ युरोप मात्र होइन, पूरा विश्वमै फुटबलको नयाँ आयाम बनेको छ । पीएसजी प्रमुख नासिर अलले त्यसै भनेका होइन, नेममार विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।
उनको दाबीअनुसार नेयमार मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोभन्दा पनि ठूला स्टार हुन् । मेसी ३० वर्षका भए, रोनाल्डो ३२ का । अबका केही वर्षमा चम्कने भनेको त नेयमार नै हुन् । मेसी र रोनाल्डोभन्दा पनि नेयमार बजारमा बेच्न बढी नाफा खाएर पस्कने मिल्न खेलाडी हुन् । खासमा नेयमार स्वयंमा एक ब्रान्ड हुन्, धेरै ठूलो ब्रान्ड । त्यसैले न नेयमारको पीएसजी यात्रालाई धेरैले ‘शताब्दीकै ट्रान्सफर’ भनेको । तय छ, यसका असर आउने केही सिजन अझ गाढा देखिनेछ ।
नेइमारको ठाउँमा यसकारण डि मारिया चाहन्छ बार्सिलोना, चार कारण
साफ च्याम्पीयनसीप : नेपाल र भारतको भिडन्त (लाइभ) भारत-१, नेपाल-०